အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေကို မျက်မှန်မတပ်ဖို့ တားမြစ်ချက်ကြောင့် ဂျပန်မှာ အငြင်းပွားစရာဖြစ်ခဲ့
အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေကို မျက်မှန်မတပ်ဖို့ တားမြစ်ချ...
8 พ.ย. 2562 - 23:02 น.
ဇွန်လတုန်းက ဂျပန်အစိုးရထံ ယူမိ အီရှီကာဝါ ပန်ကြားစာ တင်ခဲ့
အမျိုးသမီး ဝန်ထမ်းတွေကို မျက်မှန်တွေ ချွတ်ထားဖို့ ကုမ္ပဏီတချို့က ညွှန်ကြားထားတယ် ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်ခဲ့အပြီး အလုပ်ခွင်မှာ မျက်မှန်တပ်တဲ့ကိစ္စက ဂျပန်နိုင်ငံမှာ အငြင်းပွားစရာ ကိစ္စ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
အကြောင်းရင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ကုမ္ပဏီတချို့က အမျိုးသမီး ဝန်ထမ်းတွေကို မျက်မှန်တပ်ခွင့် ပိတ်ပင်ထားတယ်လို့ ဂျပန် သတင်းဌာန အတော်များများမှာ ဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။
မျက်မှန် ဝတ်ထားတဲ့ အရောင်းဝန်ထမ်းတွေဟာ အေးစက်မာကျောတဲ့ ပုံမျိုး ဆောင်စေတယ် ဆိုပြီး ကုမ္ပဏီ တချို့က ပြောတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီပိတ်ပင်ချက်ကြောင့် အလုပ်ခွင်မှာ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ဝတ်စားဆင်ယင်မှု သတ်မှတ်ချက်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ဂျပန် လူမှုကွန်ရက်တွေမှာ အကြီးအကျယ် အငြင်းပွားမှုတွေ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။
ကွဲပြား ခြားနားတဲ့ လုပ်ငန်းအသီးသီးက ကုမ္ပဏီတွေမှာ အမျိုးသမီး ဝန်ထမ်းတွေကို မျက်မှန်တပ်ခွင့် ဘာကြောင့် တားမြစ်ပိတ်ပင်ခံခဲ့ရတာလဲ ဆိုတာကို သုံးသပ် တင်ပြခဲ့သူတွေထဲမှာ Nippon TV ကွန်ရက်နဲ့ Business Insider သတင်းဌာနတွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။
လေကြောင်းလိုင်း ဝန်ထမ်းတွေကို ဘေးကင်းလုံခြုံရေး အကြောင်းပြချက်၊ အလှကုန်လုပ်ငန်း ကုမ္ပဏီတွေမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ အမျိုးသမီးတွေ မျက်မှန်တပ်ထားရင် မိတ်ကပ် လိမ်းထားတာကို ကောင်းကောင်းမြင်ရမှာ မဟုတ်ဘူး ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်တွေက အမျိုးသမီး ဝန်ထမ်းတွေကို မျက်မှန်တပ်ခွင့် ပိတ်ပင်တဲ့ အကြောင်းပြချက်တွေထဲမှာ ပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အမျိုးသမီးတွေမပါတဲ့ ပါကစ္စတန်က ဆန္ဒပြပွဲ
အမျိုးသမီးတစ်ဦး ဥရောပ ကော်မရှင်ကို ပထမဆုံး ခေါင်းဆောင်မယ်
အဲဒီ ပိတ်ပင်ချက်ဟာ ကုမ္ပဏီ မူဝါဒတွေကို အခြေခံတာလား ဒါမှမဟုတ် အလုပ်ခွင်မှာ လူမှုရေးအရ လက်ခံထားတဲ့ လုပ်ပုံလုပ်နည်းတွေကို ထင်ဟပ်ပြဖို့အတွက်လား ဆိုတာတော့ အသေအချာ မသိရပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ ဒီကိစ္စက လူမှုကွန်ရက်တွေပေါ်မှာ အချေအတင် အငြင်းပွားရတဲ့အထိ ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။
# မျက်မှန်မတတ်ရ ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာဟာ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ လူတွေအကြား စိတ်ဝင်တစား အပြောများနေပြီး သောကြာနေ့အထိ ဒီအကြောင်းကို တွစ်တာပေါ်မှာ အပြန်အလှန်ရေးနေကြပါတယ်။
ကျိုတိုမြို့ နိုင်ငံခြား ဘာသာရပ် တက္ကသိုလ်ရဲ့ လူမှုဗေဒ ပညာရပ် ပါမောက္ခ ကူမီကို နီမိုတို က ခေတ်နောက်ကျနေတဲ့ မူဝါဒတွေအပေါ် ဂျပန်ပြည်သူတွေက တုံ့ပြန်တာတွေ လုပ်လာနေကြတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
"အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေကို မျက်မှန် ပေးမတပ်တဲ့ အကြောင်းရင်းက လုံးဝ ယုတ္တိ မရှိပါဘူး။ ဒါဟာ ကျား၊ မ ပေါ် မူတည် လုပ်တာပါ။ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား ခွဲခြားတာ သိသာနေပါတယ်"လို့ သူကပြောပါတယ်။
အမျိုးသမီးတွေ ဖျော်စပ် လက်ဖက်ရည်တခွက်
အနက်ဖက်ရှင်နဲ့ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုကို စိန်ခေါ်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီးတွေ
ဒီလို လုပ်တာဟာ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ဆွေးမြေ့နေတဲ့ ရှေးရိုးအယူအဆ တွေကို ထင်ဟပ်ပြနေတာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါဟာ အမျိုးသမီးတွေ ဘယ်လို အလုပ်လုပ်သလဲ ဆိုတာ အပေါ် မူတည်တာ မဟုတ်ဘဲ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ပုံပန်းအသွင်အပြင်ကိုပဲ ကုမ္ပဏီတွေက အဓိကထားနေတာ ဖြစ်တယ်လို့ ပါမောက္ခ နီမိုတို က ပြောပါတယ်။
မကြာသေးခင်ကလည်း အလုပ်ခွင်မှာ ဒေါက်မြင့်ဖိနပ် စီးဖို့ ညွှန်ကြားမှုတွေကြောင့် အလားတူ အချေအတင် အငြင်းပွားမှုတွေ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။
အလောင်း ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုက သူတို့ရဲ့ အမျိုးသမီး ဝန်ထမ်းတွေကို ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်တွေ စီးကြဖို့ ညွှန်ကြားချက်တွေ ထုတ်ပြန်ခဲ့အပြီးမှာ အလုပ်ခွင်မှာ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ဝတ်စားဆင်ယင်မှုအပေါ် ကန့်သတ်ချက်တွေကို အဆုံးသတ်ဖို့ ပန်ကြားစာတစ်စောင်ကို ရုပ်ရှင်မင်းသမီး စာရေးဆရာမ ယူမိ အီရှီကာဝါ က ဂျပန် အစိုးရထံ တင်ပြ တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီ တောင်းဆိုမှုအပေါ် ထောက်ခံအားပေးသူတွေ အများကြီး ရှိခဲ့ပြီး လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာလည်း အခိုင်အမာ စောင့်ကြည့် ထောက်ခံသူတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။
ယူမိ အီရှီကာဝါရဲ့ တောင်းဆိုမှုကို အတူပူးတွဲ ထောက်ခံကြောင်း ပြတဲ့အနေနဲ့ အဲဒီပန်ကြားစာကို #KuToo ဆိုတဲ့ စာသားနဲ့အတူ တွစ်တာပေါ်ကနေ ဖေါ်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ #KuToo ဆိုတာ အမျိုးသမီးတွေ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ မတော်မလျော် အပြုခံရတာကို ကန့်ကွက်တဲ့ #MeToo လှုပ်ရှားမှုလို လိုက်လုပ်တာ ဖြစ်ပြီး ဂျပန်လို kutsu ဆိုတာ ဖိနပ်၊ kutsuu ဆိုတာ နာကျင်မှု ဆိုတဲ့ စာသားကို ထည့်သွင်းထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံ ရုံးဌာနတစ်ခုက ဝန်ထမ်း အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားတွေ
အလုပ်လာလျှောက်တဲ့အခါမှာလည်း ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်ကို မဖြစ်မနေ စီးရမယ်လို့ ယူဆထားကြကြောင်း လှုပ်ရှားသူတွေက ပြောပါတယ်။
ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ အဝတ်အစား သတ်မှတ်မှုထဲမှာ ဒေါက်မြင့်ဖိနပ် ဝတ်ဖို့ အချက် ထည့်သွင်းဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ ဂျပန် ဝန်ကြီးတစ်ဦးက ပြောခဲ့တဲ့အတွက် လူတွေ ပိုဒေါသထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဒေါက်မြင့်ဖိနပ် ဝတ်ရမယ် ဆိုတဲ့ မူဝါဒတွေကို ဂျပန်နိုင်ငံက အမျိုးသမီးတွေ ဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေ ဆက်ရှိနေမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ပါမောက္ခ နီမိုတို က ပြောပါတယ်။
"အများအားဖြင့် ပုံပန်းသဏ္ဍာန်ကို ကြည့်ပြီး အမျိုးသမီးတွေကို တန်ဖိုးဖြတ်တတ်ကြပါတယ်။ ဒီလို သဘောထားမျိုးတွေ ရှိနေတယ် ဆိုတာ ဒီမူဝါဒတွေက ပြနေပါတယ်" လို့ သူက ပြောပါတယ်။
อัลบั้มภาพ အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေကို မျက်မှန်မတပ်ဖို့ တားမြစ်ချက်ကြောင့် ဂျပန်မှာ အငြင်းပွားစရာဖြစ်ခဲ့